ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: တွေးချင်ရာတွေး ရေးချင်ရာရေး (၄)
ရေးပြီးချိန်: 6/20/2008 02:55:00 AM
ha ha ha, you haven't write like this inawhile...that's what i like about reading your blog, you haveasense of humor and say it like it is!
you made me laugh out loud while reading it. Thank You...for sharing.
ဟားဟား... ကိုmaung ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူး...း)
http://draft.blogger.com မှာ blog list ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့တာနဲ့လုပ်တာ။ အဲ့ဆိုဒ်ကလဲ ဘလော့ဂ်စပေါ့ဆိုဒ်ပဲ။ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ စီဘောက်မှာဆို မမြင်လိုက်မှာ စိုးလို့ ဒိမှာဝင်ရေးလိုက်တယ်။
ကိုမောင်ရင်... တကယ်လား... ကျေးဇူး... :P
ကိုလူသစ်... ကျေးဇူးပါဗျို့... စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်... :)
ဖတ်ပြီး ပြုံးရယ်သွားတယ် ...း) လွဲတတ်တာလေးတွေပေါ့ ။ s0wha1 ကို ယောက်ျား မိန်းမ မကွဲတဲ့ စာဖတ်သူတွေရှိတာတော့ဟိုအရင်က စီပုံးမှာလည်း သတိထားခဲ့မိဖူးတယ် ။ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ မလေးမ ရေးထားတာ ခုလေးတင်ဖတ်မိလိုက်သေးရဲ့ ။ရန်ကုန်ပြန်မှတ်တမ်းကို နောက်မှ ပြန်လာဖတ်ဦးမယ်ဗျာ ။ ကျေးဇူး ...
ကိုမိုးညိုကြီး ပြန်လာပြီလား... ၀မ်းသာပါ၏... :)
အဲ... ဘာရယ်တာလဲ... :D
ခုတလော ခပ်ပေါ့ပေါ့သာ ဖတ်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေ အကြောင်းကို မြင်မြင်နေရတယ်။ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ဒါမှလဲ သူတို့ သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။း)
အသေအချာ ဂရုတစိုက် ဖတ်သွားပါတယ်။
ညီလေး “မောင်ဆိုးဝှပ်” က ဟာသ အတော်ရေးတာဘဲ။ ဟို ခွေးရုပ်ဘူတာနားက အဖြစ်အပျက်ကိုရောက်တော့ မနေနိုင်ဘူး။ အသံထွက် ရယ်မိတယ်။
ကျနော့်သမီးကိုတောင် သတိရတယ်။ သမီးကပြောတယ်။ “ဖေဖေတို့က ဇီးကွက်တွေ။ ညဆိုရင်မအိပ်ဘူး။ မနက်ကျတော့ နေမြင့်မှထတယ်။” …..တဲ့။
“ဖေဖေတို့က ဇီးကွက်ဆိုရင် သမီးကရော”…လို့ ပြန်မေးတော့ “မီးနဲ့အဖွားကတော့ ရိုးရိုးညှက် (ငှက်) တွေ…”….တဲ့။ မဆိုးဝှက်နဲ့ မတူဘူးလား။
မောင်လေး မင်းကျန်စစ်ရေ... ဒီလိုပါပဲ။
ကိုပေါ... ဟာသရေးတာတော့ ဟုတ်ဘူး။ ဟာသဖြစ်သွားတာ။ အလွဲတွေပေါ့။ ဟုတ်ပါ့... ကလေးနဲ့တူနေပြီ။ အဲဒီနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရယ်ရင်း ၀င်ပြောသေးတယ်။ နင်က အရမ်းရယ်ရတာပဲတဲ့။ @_@